၂၀၁၀ အတွင်းက နေ့ရက်များဖြစ်သည်..။
ထိုအချိန်... ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂံလီများ အား
ဘူးသီးတောင်မောင်တော ဒေသရှိ စစ်အာဏာပိုင်များအပါအ၀င်
ဌာနဆိုင်ရာများ က္ကုနြေ္ဒ ပျက်လောက်အောင်ပင်...
အတိုးချပြီး စစ်အစိုးရအား ကျေးဇူးတင်နေကြသည်.၊
သူတို့၏ ဘ၀နှင့်ဆိုင်သော ကျေးဇူးရှင်များပင်တည်း..
သူတို့ ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ လုပ်ကြမည်ဖြစ်သည်.။
ထိုအချိန်တွင် ရခိုင်ဒေသ၏ စည်းရုံးရေးတာဝန်ယူထားသော
ဘူးသီးတောင်မှ ကြံ့ဖွတ်ကိုယ်စာလှယ် ရွေမောင်နှင့်
မောင်တောကိုယ်စားလှယ် အောင်ဇော်ဝင်း (ရှိုင်းဆောက်လုပ်ရေး)
ရည်ရွယ်ချက်သည်...white card များကြောင့်..
(WHITE CARD) ကိုင်ဆောင်ထားသူများမှာ..
ဘင်္ဂံလီ ဖွတ်အမတ် အောင်ဇော်ဝင်း ၊ ရွေမောင် ၊ ဌေးဝင်း
မဲတစ်ဆ ကျော်အသာဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်.။
လူမှုရေးဦးတည်ချက် များကို ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင်..
မည်သူ အမျိုးသားသစ္စာဖေါက်သနည်း ?
ဘင်္ဂံလီများအား white card ကိုင်ရာမှ..
ပိုင်ရှင်ဖြစ်သော.. အောင်ဇော်ဝင်းက ဘင်္ဂံလားဒေရှ့်နိုင်ငံ
ကော့ဘဇားမြို့တွင်ထုတ်ဝေသည့် DAINIK COX’S BAZAR
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနှင့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော စစ်ဗိုလ်များက..
ထိုသူတို့ရာဇ၀င်မှာ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှ ရန်ကုန်မြို့သို့
သမိုင်းတရားခံ လို့ သတ်မှတ်ပါက လွန်မည်မထင်ပေ..၊
NLD လွှတ်တော်ထဲဝင်ပြီးကာစ..NLD က ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးရဲ့ "
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ လူမျိုးခြားများ နိုင်ငံတွင်း ၀င်ရောက်နေခြင်း၊
စီမံချက်ချမှတ် အရေးယူရန်" ဆိုတဲ့ အဆိုတစ်ခုတင်လိုက်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ..လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံနှစ်ခုကြားမှာ ရှိပါတယ်။
အနောက်ဘက်မှာဆိုရင် လူဦးရေ သန်း ၂၀၀ နီးပါးရှိပြီး
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြောက်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ လူမျိုးခြားတွေ ၀င်ရောက်နေပါတယ်။
အနောက်ဘက်မှာလည်း သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အကျယ်အ၀န်းနဲ့ မမျှတဲ့အတွက်
မညီညွတ်တာတွေအပြင် သူတို့ရဲ့ မျိုးဆက်တွေဟာ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အကျင့်ပျက်၊ ခြစားကာ တိုင်းပြည်ရဲ့ မျက်နှာမထောက်တဲ့
နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်မှာ အချက် အလက်တွေ အကုန်မထည့်ဘဲ
ရခိုင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေဖို့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေ ရှိပါတယ်။
တရားမ၀င် စိမ့်ဝင်လာတာတွေ၊ စိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ထားတာတွေ၊
လူမျိုးခြားတွေကို အရေးယူပေးဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ'' ......
ထိုသို့ ရဲရဲတောက်တင်ပြခဲ့သော..NLD ပါတီရဲ့အဆိုအား..
NLD ပါတီနှင့် ရခိုင်ပါတီမှလွဲပြီး...ထောက်ခံမည့်သူမရှိပေ..။
ထိုအဆို ရှုံးနိမ့်သွားပါသည်.. ၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတောင်မခံရပါ။
"၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ဇွန်လအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်၌ အင်္ဂလီဆူပူမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်
ပဋိပက္ခများအပေါ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာ
နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူဝင်လူထွက် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာမြောက်ရေတို၊ ရေရှည်အထူးအစီအမံတို့ဖြင့်
အဲဒီအဆိုလည်း ကန့်ကွက်ခံရပြီး စုတ်ပြတ်သတ်စွာရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်..
ဘယ်သူတွေထ ကန့်ကွက်တာလဲ ဆိုတော့..ဖွတ်ပါတီမှ ဦးလှဆွေပါ..၊
နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရသူ သို့မဟုတ် ယာယီ သက်သေခံ လက်မှတ် ကိုင်ဆောင် ထား သူ ဖြစ်ခြင်း"
ဖွတ်လော်ဘီတွေရဲ့ flow မှာမြောပါပြီး..
OIC အခုတစ်ခေါက် ဘာလာလုပ်တာလဲ..?
အထက်မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂံလီ ၈ သိန်း ကို
ကိတိခံထားတဲ့ ဦးသန်းရွှေရဲ့ စကား..
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 4:49 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook